2 hp matoor koronto 3450 rpm tefc, 2hp 240v wejiga hal korantada hal mar
2 hp wajiga hal koronto 3450 rpm tefc, 240V
2hp motor motor for sale
2hp Fiidiyowga Mootada
Faahfaahinta 2hp motor motor
2hp motor motor 1750 rpm, 2hp motor motor 3 wejiga, 2hp motor motor with VFD, 2hp motor motor 1750 rpm wejiga hal mar.
Waa maxay nooca 2hp motor motor?
2hp mashiinka korantada 3 wajiga iyo 2hp mashiinka korantada hal waji; 2hp nooca korantada AC iyo nooca DC; 2 hp 56c mootada dhismaha iyo 2 hp IEC mootada.
Mashiinka korontada ee 2hp leh VFD wuxuu sameyn karaa xawaare isbeddelaya, Ujeeddo Guud si loo gaaro koboc weyn ee warshadan.
Maxay u doorteen matoorkeena koronto ee 2hp?
Annaga oo ah adeeg bixiyaha caalamiga ah ee matoorrada, Waxaan bixinaynaa tiro tayo sare leh oo tayo sare leh oo ah 2hp motor motor. Waxaa loo asaasay shirkad gaar u ah Sole Proprietorship sanadkii 2003.
Tayada Cajiib ah ee 2hp Electric Motor
Dhamaan noocyada 2hp motor motor 110V, 2hp motor motor 3450rpm, 2 hp 56c Moorga Masawirka, 2 hp matoorka korantada ee doonyaha.
Waxtarnimo Heer Sare ah oo Waajibaad Ba'an ah, oo leh dhammaan Xargaha Maarta ah ee gudaha ku jira, Waxtarka: 86.0%; Xayndaab: Gabi ahaanba wuu xiran yahay, daboolka sare. 2hp amps koronto oo leh waxqabad dhameystiran.
Fiican oo dhammeystiran iyo dhammeystir, Xarig tayo leh, Fididda jiho kasta, AISI 4140 shaft shay, Si fudud ayaa loo aqriyaa khaanadaha bir aan kala go 'lahayn.
Waxaa jira dhamaan noocyada 2 matoorrada korantada ee keydka ah waxaanna u diri doonnaa 2 maalmood gudahood marka aan helno amarradaada.
Dhammaan macluumaadka waxaa taageeray dammaanad 2year ah. Injineerkeenu wuxuu udiyaar garoobayaa lama filaan, sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho dhibaatooyinka korantada 2hp.
Qalabkayaga korantada ee 2hp wuxuu socodsiin doonaa howlahaaga kor u qaadida iyo socodsiinta, oo leh rotor isku dheellitiran oo tayo leh, wax ka qabad badan, dardargelinta waajibaadka Heerka H, ​​sifiican oo dhameystiran.
Hal Guri Oo La Diro
Soo-saare ahaan, waxaan taageernaa iibinta iyadoo lagu saleynayo hal unug. Si balaadhan loogu adeegsaday Quudiyeyaasha, wacyigelinta, taageerayaasha, augers-yada, kombuyuutarrada, weelka buufinta, cabitaanka, wiishashka ama bambooyinka.
Ujeedada Guud ee Gawaarida Korantada Mashiinka ee 2hp oo leh birta ama bir ama aluminium, ayaa loo sameeyay inuu la kulmo codsiyada kala duwan oo leh wax qabad weyn iyo dhaqaale.
2hp matoorka korantada 1750 rpm Si buuxda u Xirmay Fan Farsamaysan, 2hp matoor koronto 1750 rpm ayaa laga heli karaa Open Drip-proof iyo dhismaha TEFC ee wejiga keliya. IronHorse 2hp matoorka korantada 3, guluubka 24mm wajiga korantada hal mar 240v ee loogu talagalay isku darka sibidhka. Ujeedada guud ee 2 hp korantada korantada 1725 rpm hal waji, 2 hp xawaaraha korantada kuleylka iyo isuduwaha, 1 / 2 hp motor motor, 2hp motor motor single phase.
Farm Duty 1hp motor motor, Raqiis ah 2hp matoor koronto oo leh VFD, Compressor Duty 2hp motor motor 110V, Culeys buuxa ayaa hadda ah 2hp motor motor amps, 2hp motor motor 3450 rpm for use halka gaadhista biyaha, wasakh iyo boodhku jiro, Shiinaha 2hp motor motor for for iibinta, 2 hp 56c frame motor Frame 5 / 8 "Shaft Single Wajiga 115 / 230 Volt 3450 RPM TEFC.
Fan Pump Compressor Ujeedada guud ee 2 hp korantada 3450 rpm tefc, soo jiidashada dusha sare ee 2 hp doonyaha korantada, 2 hp matoor koronto waa mid awood badan oo wajiga loogu talagalay gaar ahaan loo adeegsado miisaska miiska.
NAGU SAMEE CATALOG PDF
2hp motor motor 1750 rpm wejiga hal, 2hp 240v koronto hal mar ah matoor, 2hp motor motor with VFD